Luis Suarez oo shaaca ka qaaday sababta uu ugu biiray kooxda Atletico Madrid – Gool FM
(Madrid) 26 Sebt 2020. Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa shaaca ka qaaday sababta uu ugu biiray kooxda Atletico Madrid.
Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain ayaa ku dhawaaqday saxiixa Luis Suarez, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Barcelona beeca xurta ah.
Luis Suarez ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan halkan u imid si aan ugu guuleysto waxyaabo muhiim ah, Atletico Madrid waa koox weyn, haddii aad dooneysid iyo haddii kaleba, sanadihii ugu dambeeyay waxay mar walba la dagaallami jirtay Barcelona iyo Real Madrid, waxayna cadeen u tahay sida ay u doonayaan inay tartamaan”.
“Wadahadalkii aan la yeeshay tababaraha waa faa’iido dheeraad ah oo ku saabsan rabitaankeyga inaan imaado Atletico Madrid, waa wax igu dhiirigaliyay, qaabka uu kuula hadlayo, waa rabitaan kale”.
“Wuxuu ii sheegay waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan kooxdan, wuxuu taariikh ka sameeyay Atletico Madrid, wuxuu ii soo bandhigay inuu i caawin doono, isla markaana uu isiin doono wax walba oo aan uga baahanahay halkan Madrid, waana ku faraxsanahay taas”.